Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » saaciday inay » Khadka Disney Cruise Line wuxuu mamnuucay carruurta aan la tallaalin
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • saaciday inay • kariska • dhaqanka • Entertainment • Films • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Raaxada • Music • News • Dadka • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Khadka Disney Cruise Line wuxuu mamnuucay carruurta aan la tallaalin.
Xeerarka cusub ayaa noqon doona shuruud looga baahan yahay rakaabka Maraykanka iyo kuwa caalamiga ahba, iyagoo si wax ku ool ah uga joojinaya carruurta ka imanaysa dalalka aan tallaalin carruurta aadka u yaryar.
Shuruudaha tallaalka COVID-19 ee rakaabka ee la cusboonaysiiyay waxaa maanta ku dhawaaqday Disney.
Xeerarka tallaalka COVID-19 ee New Disney Cruise Line ayaa dhaqan galaya laga bilaabo Janaayo 13, 2022.
Dadka aan u qalmin tallaalka da'da awgeed waa inay keenaan caddaynta natiijada baaritaanka COVID-19 ee xun ee la qaaday 3 maalmood iyo 24 saacadood ka hor taariikhda shiraacan.
Khadka Disney Cruise Line wuxuu ku dhawaaqay baahidiisa cusub ee tallaalka COVID-19 iyo ballaarinta ugu weyn ee waajibaadkeeda tallaalka maanta.
Iyadoo la tixraacayo tilmaamaha tallaalka ee Mareykanka, oo dhawaan la ballaariyay laguna daray XNUMX-sano jir, Khadadka Cruise Disney wuxuu sheegay in carruurta da'doodu ka yar tahay shan sano ay u baahan doonaan in laga tallaalo fayraska COVID-19 si ay awood ugu yeeshaan inay fuulaan maraakiibtiisa.
Disney, oo ah khadka ugu horreeya ee safarka weyn ee u baahan jabs ee carruurta, wuxuuna sheegay in shuruudaha cusub ay dhaqan geli doonaan laga bilaabo Janaayo 13, 2022.
"Sida aan mar kale dhoofeyno, caafimaadka iyo badbaadada Martidayada, Xubnaha jilbaha iyo Xubnaha Crew waa mudnaanta koowaad," Disney ayaa ku tiri hadal ay soo saartay. "Diiradayada ayaa ah inaan u shaqayno maraakiibteena si mas'uuliyad leh oo sii wada abuurista sixirka dhammaan markabka."
Dadka aan u qalmin tallaalka da'da awgeed waa inay keenaan "caddayn natiijada baaritaanka COVID-19 ee xun ee la qaaday 3 maalmood iyo 24 saacadood ka hor taariikhda shiraacan."
Khadadka Cruise Disney ka digay in aan la aqbalin shaybaarada antigen-ka iyo in imtixaanadu ay noqdaan imtixaanada NAAT, imtixaanada PCR ee degdega ah ama shaybaadhka PCR ku salaysan.
Khadka dalxiisku waa qaybta koowaad ee safarka Shirkadda Disney si loogu baahdo tallaalka macaamiisha. Hadda, jardiinooyinka mawduuca Disney ma hayaan wax COVID-19 ah oo looga baahan yahay tallaalka booqdayaasha. Si kastaba ha noqotee, dhammaan shaqaalaha Mareykanka ee ku sugan goobahaas waa in laga tallaalaa coronavirus-ka.
Maraakiibta dalxiisku waxay si joogto ah u noqdeen goobo COVID-19 ah bilihii ugu horreeyay ee cudurka faafa ee coronavirus, iyadoo rakaabka iyo shaqaaluhu ay si wada jir ah cudurka uga qaadeen deegaannada xaddidan ee maraakiibta badda.
Faafida ayaa si aad ah u saameysay warshadaha safarka, iyadoo khadadka badan ay ku sii qulqulayaan saameynta COVID-19 iyo xayiraadaha lagu soo rogay safarka adduunka oo dhan.